Izindatshana zikaMadhavi Vaidya Martech Zone |
Imibhalo nge UMadhavi Vaidya
UMadhavi ungumbhali Wokuqukethwe Okudala onolwazi lweminyaka eyi-8 + embonini ye-B2B. Njengombhali wokuhlangenwe nakho kokuqukethwe, inhloso yakhe ukufaka inani kumabhizinisi ngamakhono akhe wokubhala wokuqukethwe ahlukile. Uhlose ukusungula ibhuloho lezilimi phakathi kwezobuchwepheshe nezamabhizinisi ngothando lwakhe lwegama elibhaliwe. Ngaphandle kokubhala okuqukethwe, uthanda ukupenda nokupheka!
Okuqukethwe Okungenwe ngaphakathi: Isango Lakho Lokuhola Okuhle kwe-B2B!
NgoMgqibelo, Disemba 19, 2020 NgoMgqibelo, Disemba 19, 2020 UMadhavi Vaidya
Okuqukethwe okunamasu isu elisetshenziswa izinkampani eziningi ze-B2B ukunikeza okuqukethwe okuhle nokunenjongo ukuthola imikhondo emihle ngokushintshana. Okuqukethwe okunamasango akunakufinyelelwa ngqo futhi umuntu angakuthola ngemuva kokushintshana ngolwazi oluthile olubalulekile. Ama-80% wezimpahla zokumaketha ze-B2B zibiyelwe; njengoba okuqukethwe okunamasango kungamasu ezinkampanini zokukhiqiza ezihola phambili ze-B2B. I-Hubspot Kubalulekile ukwazi ukubaluleka kokuqukethwe okunamasango uma uyibhizinisi le-B2B futhi unjalo
NgoMsombuluko, Juni 15, 2020 NgoMsombuluko, Juni 15, 2020 UMadhavi Vaidya